Semalt Expert: Nahoana no mipoitra amin'ny Google Analytics ny fanalahidy ho an'ny tranokala?
Manampy tranainy maro ny aterineto mba hahombiazana amin'ny aterineto miaraka amin'ireo orinasa e-varotra. Toy izany koa, misy ny ampahany mitovy amin'ny dingana goavana rehetra izay manandrana manandrana ny fanandramany an-tserasera. Ny ankamaroan'ny orinasa dia mahazo ny mpanjifany an-tserasera amin'ny fametrahana orinasa e-commerce mahomby. Miaraka amin'ny dikan-tserasera nomerika , dia mety ho tafiditra amin'ny fanandramana maro amin'ny fanaovana mailaka mailaka tsy hita intsony amin'ny mailakao ianao - was ist ein chronograph. Voalohany indrindra, ny fahaiza-manao amin'ny dizitaly dia mitondra fitaovana vaovao hananganana processe toy ny Search Engine Automation (SEO).
Ny sasany amin'ireo fitaovam-pivarotana amin'ny aterineto dia iharan'ny fanafihana spam. Ilaina ny fanakanana spam referendra amin'ny sasantsasany amin'ireo fitaovana ireo mba hahazoana antoka ny fe-potoana amin'ny tranokalanao manontolo. Tadidio fa ny fiarovana ny tranokalanao dia miankina amin'ny teknolojia manohitra ny spam amin'ny toerana hanakanana ny spam referral. Azonao atao ny miaro ny fampahalalam-baovao avy aminao sy ny fahamarinan'ny orinasanao. Google Analytics dia fitaovana SEO ampiasain'ny maro izay mety hahatsikaritra ny ankamaroan'ny webmasters amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny ankapobeny. Azo atao ny manadino ny tsipika fanadalana toy ny Buttons For Website avy amin'ny Google Analytics.
Nanazava ny fomba hanakanana spam referans tahaka ny Buttons For Website
i Lisa Mitchell, mpitantana ny Success Successor Semalt .
Ao amin'ny Google Analytics dia afaka manalavitra ny fifamoivoizana avy amin'ny sehatra manokana ianao. Azonao atao ny mamolavola fomba izay ahafahanao manazava ny fampahalalam-baovao momba ny fanadihadiana tsy misy adiresy momba ny spam. hanova ny fandalinana ny angona momba ny raharaham-barotra mitarika amin'ny antontan'isa diso.
Misy teknika vitsivitsy ahafahana mampiasa tranonkala avy amin'ny Buttons For Website na Darodar:
Mampiasà mailaka azo antoka
Ny fampiasana mpamatsy mailaka azo antoka mba hiarovana ny mpitsidika anao amin'ny hackers dia tsara fialana. Ny sasany amin'ireo sehatra iraisana misy spam referral dia avy amin'ny loharano tsy fantatra. Mpanome alalana mailaka afaka miaro ny mpihaino amin'ny mailaka toy izany. Izy ireo koa dia manakana ny sarimihetsika sary izay mety hiteraka fikomiana hack kokoa.
Amin'ny Google Analytics dia azonao ampiasaina ny sakana amin'ny tranokala Spam amin'ny tranonkala mba hanakanana spam referral avy amin'ny data-nao. Azonao atao ny manangona fanazavana marina momba ny fanatanterahana ny tranokalanao ary koa ny tombony maro. Ankoatra izany, afaka mahavita mitazona fepetra matanjaka amin'ny aterineto ianao noho ny fepetra fiarovana amin'ny tranokalanao.
Mamantatra ny mpampiasa
Mitazona ny mpihaino anao amin'ny fampahalalana momba ny SEO mikasika ny fahombiazan'ny tranonkalanao. Ilaina ny mahafantatra hoe rahoviana sy ahoana ny tsy firaharahiana spam-referans toy ny karatry ny mpangalatra amin'ny carte de crédit.
Ny tranonkala E-varotra tsirairay dia misy fomba maro ahafahan'ny olona mahazo tombontsoa lehibe ho an'ny varotra. Ny raharaham-barotra mahomby dia manamboatra orinasa e-commerce mba hahatonga ireo tranonkala hitondra mpanjifa maro avy amin'ny faritra maro maneran-tany. Amin'ny alàlan'ny fivarotana nomerika, azo atao ny maka fifamoivoizana amin'ny olona mety ho mpanjifa. Ao amin'io fepetra io ihany, maro ireo olona mety te-hanentana ny mpitsidika avy amin'ny loharano samihafa hanampy amin'ny fivarotana. Zava-dehibe ny manakana ny spam amin'ny anaran'ny mpampiasa Google Analytics ary mamonjy ny orinasanao amin'ny fatiantoka goavana. Ity torolalana SEO ity dia manazava ny antony sy ny fomba hanakanana ny Spam momba ny fanondroana an'i Darodar sy ny tsipikao amin'ny Google Analytics.